Wabiga Ganges: astaamaha, wasakhda, dhirta iyo xayawaanka | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah wabiyada ugu muhiimsan qaaradda Aasiya iyo adduunka waa kan Wabiga Ganges. Waa mid ka mid ah wabiyada loo arko inay muqadas u tahay Hinduuga, iyadoo wadar ahaan ay dhan yihiin toddoba. Waxay leedahay fiditaan ka badan 2.500 oo kilomitir waxayna bilaabmaysaa qulqulka Hindiya waxayna ku egtahay Bangladesh. Sababtaas awgeed, waxaa loo bixiyay cinwaanka maalinta caalamiga ah.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan astaamaha, wasakheynta, dhirta iyo xayawaanka webiga Ganges.
2 Wasakhaynta Wabiga Ganges iyo Khatarta
3 Dhirta iyo xayawaanka webiga Ganges
In kasta oo muhiimadda taariikhiga, dhaqanka iyo habnololeedku ay tahay, haddana wabiga weli si weyn ayuu u nijaasoobay maxaa yeelay wuxuu helaa qashin fara badan oo banii’aadam ah oo aakhirka ku sii qulqulaya badda. Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee wasakheynta balaastigga ee heerka badda.
Maaddaama ay tahay warshad dalxiis oo muhiim u ah dakhliga dhaqaale ee Hindiya, webiga Ganges waa mid ka mid ah astaamaha shisheeyaha. Baaskiil ama qaabab kale oo gaadiid looga soo qaado meesha uu asal ahaan ka soo jeedo ee loo maro Delta waa mid ka mid ah howlaha ugu badan ee soo jiita dalxiisayaasha.
Wabigaan, oo markii hore loogu yeeri jiray Rio Blanco, wuxuu midabkiisii ​​ku waayey wasakheynta oo wuxuu u baneeyey cagaarkii dhulka ee uu hadda ahaa. Wadadiisu waa qiyaastii 2.500 kiiloomitir, celcelis ahaan socodka 16.648 mitir cubic ilbiriqsikiiba, kaas oo ku kala duwanaan kara xilliyada. Bedka waa 907.000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Webiga jiinkiisa waxaa quudiya biyo mareenno badan, oo lagu garto qashin, qoto dheerna waxaa lagu qiyaasaa inta u dhexeysa 16 illaa 30 m. In kasta oo aanu ahayn webiga adduunka ugu dheer, haddana waa webiga ugu muhiimsan dalka Hindiya 80% webiyadu waxay joogaan Hindiya. Waxaa loo qaybiyaa hubka yaryar iyo kuwa waaweyn qaybo kala duwan oo ka mid ah marinkiisa, samaynta shabakad isku xidha kanaallo, oo matala soo jiidashada muuqaalka ah, kuna taal afkeeda.
Waqtigan xaadirka ah waa mid wasakh badan, waxaa jira qiyaastii 1,5 milyan oo bakteeriyada coliform ah 100kii ml, 500 oo ka mid ah oo ku habboon badbaadada musqusha. Intaa waxaa dheer, daraasad la sameeyay ayaa muujisay in 545 milyan oo kilogram oo wasakh ah oo caag ah ay ku maydhay badda. Webiga Ganges waxaa loo adeegsaday in dadka ku nool ay ka helaan nolol jaban iyo biyo maalinle ah iyada oo loo marayo kanaallada iyo nidaamka waraabka. Sidoo kale, waxaa jira biyo xireeno wadada socda si ay biyaha ugu geeyaan meelaha kale.
Wasakhaynta Wabiga Ganges iyo Khatarta
In kasta oo Wabiga Ganges loo arko meel muqaddas ah oo leh muhiimad taariikhi ah, dhaqaale iyo dalxiis, haddana Webiga Ganges waa mid si xun u wasakhaysan. Kuwa ku maydha biyaheeda si ula kac ah ama ogaal la’aan waxay jaahil ka yihiin xaqiiqadan. Waxyaabaha ugu badan ee wasakhda ah ee aan ka heli karno wabigan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Awood la'aanta dadka inay qashinka si sax ah u daadiyaan
Warshaduhu waxay kudhow yihiin kuwa wasakheeya mid kamid ah biyaheeda waawayn, wasakhdu waxay ku dul qulqulaysaa wabiga oo dhan.
Dhirta Hydroelectric waxay daadiyaan qashinka oo si xun ula dhaqmaan nidaamka deegaanka.
Dabaaldegyada iyo xafladaha diimeed ayaa lagu daadiyaa meydad lagu tuuray webiga oo qudhunkooduna wuxuu ku dhammaanayaa wasakheynta biyaha.
1980-yadii, qof ayaa bilaabay olole lagu nadiifinayo Ganges, laakiin jaahilnimada iyo diin la’aanta dadka darteed, saameyn weyn kuma yeelan. Sannadkii 2014, mawduuca mar kale ayaa loo dallacsiiyay si ka awood badan, laakiin ma keenin natiijooyin aad u wanaagsan.
Wasakhdu waa dhibaato daran oo saameysa wabiyada, taasoo khatar gelinaysa dadka isticmaala iyo noolaha ku nool biyahooda. Si kastaba ha noqotee, ma aha qodobka kaliya ee khatarta ku haya Ganges, biyo yaraanta iyo macdanta sharci darrada ah ayaa halis gelisa.
Waqti, moolka hoose ee warankani wuxuu gaadhay 60 mitir, laakiin hadda waxaa laga dhigay 10 mitir. Si loo xaliyo dhibaatadan, qodista iyo soo saarista biyaha dhulka hoostiisa ayaa la sameeyay, laakiin saameynta xun ayaa wali taagan.
Dhirta iyo xayawaanka webiga Ganges
Horumarinta beeraha ee dooxada Ganges awgeed, ku dhowaad dhammaan dooggii asalka ahaa ee kaymaha waa la waayey. Waxaa la arki karaa in kaliya Robusta Shorea ay awood u yeelatay inay iska celiso qeybta sare iyo Bombax ceiba qeybta hoose. Joogitaanka xoogan ee bini'aadamka iyo saameynta cimilada ee aaggan ayaa ka hortageysa in dhir badan ay soo baxdo. Si kastaba ha noqotee, Ganges delta, waa suurtogal in laga helo kayd cufan oo mangrove ah Sundarbans.
Isla qodobadaas, xaaladaha aadanaha iyo cimilada, marka lagu daro wasakheynta biyaha, waxay saameyn taban ku leeyihiin jiritaanka noocyada xoolaha ee Ganges. Kaliya dhaadhaca Himalayas iyo Ganges delta waxay leeyihiin meelo xasilloon oo aan dad badani ka dhalan.
Qeybta kore ee bannaanka waxaa ku yaal wiyisha Hindida, maroodiyaasha Aasiya, shabeellada Bengal, libaaxyada Hindida, boholaha, iyo bisinka. Hadda kaliya noocyada sida yeeyda Hindiya, dawacada guduudan iyo dawacada Bengal iyo dawacada dahabiga ah ayaa laga heli karaa.
Shimbiraha waxaa ka mid ah baqshiishka, diiqda, diirkaba, xiddigo iyo shinbiro guurguura xilliga qaboobaha. Xayawaannada halista ku jira waxaa ka mid ah badeedka afarta gees leh, bustard-ka Hindiya, bustard-ka yar, iyo doolfinka xayawaanka biyaha ku nool ee Ganges River ee Hindiya.
Faunada aaga hoose wax badan kama duwana faunada aaga sare, in kasta oo noocyo ay ka mid yihiin civet-kii weynaa ee Hindiya iyo otter-kii simanaa lagu daray. Shabeelka Bengal wuxuu leeyahay aag la ilaaliyo oo ku yaal Ganges delta. Waxaa lagu qiyaasaa inay jiraan ku dhowaad 350 nooc oo kalluun ah oo ku jira biyaheeda.
Xamaarato ka mid ah, Yaxaasyada ayaa ugu caansan, sida yaxaasyada qoyan iyo yaxaasyada; iyo qoolleyda, sida qoolleyda saddexda midab leh, digaagga madow ee Hindida ah, digaagga weyn ee Cantor, digaagga jilicsan ee Hindiya, iwm.
Sidaad aragtoba, mid kamid ah wabiyada ugu caansan aduunka ayaa gebi ahaanba wasakhaysan oo luminaya kala duwanaanshaha kaladuwanaanta. Hadday tahay dhaqan ama horumar dhaqaale, bini aadamku wuxuu si xun u saameeyaa nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto Wabiga Ganges iyo astaamaha uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Ganges River